Cabdi Raxmaan Faroole: Ma Filayo In Leyga Guuleysnayo – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Garowe, Mareeg.com: Madaxweynaha maamulka Puntland ee waqitu ka dhamaaday C/raxmaan Faroole, islamarkaana maanta xilkaas mar kale kula tartamaya 10 musharrax oo kale ayaa sheegay inuu rajo weyn ka qabo in mar labaad ku guuleysto xilkaas.
Faroole oo shalay baarlamaan goboleedka Puntland u jeediyey khudbada qorshihiisa 5-ta sano ee soo socota ayaa tilmaamay in waxa keenay in 212 musharrax ku tartamaan xilalka madaxweynaha iyo ku xigeeniisa ay tahay waxqabadkii uu muujiyeen 5-tii sano ee uu xilka hayay.
Wuxuu sheegay Faroole in haddii laga guuleysto uu xilka ku wareejin doono musharraxa guuleystay hase ahaatee uusan fileyn in laga guuleysan doono.
“Aniga waxey xildhibaanadu igu dooranayaan wixii aan qabtay 5-tii sano ee lasoo dhaafay iyo qorshaha 5-ta sano ee aan soo gudbiyey, haddiise leyga guuleysto waan wareejinayaa xilka, mase filayo iney la iga guuleysanayo” ayuu yiri Faroole.
Faroole, Cali Xaaji Warsame, C/weli Maxamed Cali Gaas iyo Maxamed Cabdinuur Xirsi ayaa la sheegayaa iney ugu cadcadyihiin kusoo bixidda xilka madaxweynaha, inkastoo uu soo bixi karo qof kale.